Gudoomiyaha CAF oo booqday goobo Isboorti oo ku yaalla magaalada Muqdisho +Sawirro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Gudoomiyaha CAF oo booqday goobo Isboorti oo ku yaalla magaalada Muqdisho +Sawirro
Madaxweynaha Xiriirka Kubada cagta Qaarada Afrika (CAF) Ahmed Ahmed oo maanta booqasho ku yimid magaalada Muqdisho ayaa booqday goobo Isboorti.
Ahmed Ahmed ayaa waxaa si diiran u soo dhoweeyey masuuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen Wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha ee xukuumada Somalia Khadijo Maxamed Diiriye, Guddoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubada Cagta C/qani Saciid Carab iyo xubno kale.
Goobaha Isboorti ee uu booqday Madaxweynaha CAF waxaa ka mid ah garoonka Kubada cagta ee Istadyum Muqdisho, iyadoo ciidamada AMISOM ee degan halkaas ay markii hore diideen in wafdigan ay gudaha u galaan garoonka inkastoo markii dambe loo fasaxay.
Waxaa kale oo ka mid ah goobaha ay booqdeen garoonka kubada cagta Banaadir oo ku yaalla degmada C/casiis iyo xarumo kale, waxaana wafdigan warbixino laga siinayey xaalada goobahan iyo heerka uu marayo isboortiga Somalia.
Madaxweynaha xiriirka kubada cagta Qaarada Afrika (CAF) ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato madaxda sare ee dowlada Somalia ka hor inta uusan ka ambabixin magaalada Muqdisho.